War Deg Deg ah:Abuu Mansuur Al-amriiki oo Caawa Maqribkii la dilay iyo Dilkiisa oo La shaaciyay | Salaan Media
War Deg Deg ah:Abuu Mansuur Al-amriiki oo Caawa Maqribkii la dilay iyo Dilkiisa oo La shaaciyay
Sida uu sheegay Fu’aad Maxamed Shangole oo ka mid ah saraakiisha sare ee Al-Shabaab, waxaa Cawa lagu dilay tuulo u dhow deegaanka Raama-caddey Cumar Xamaami oo loo yaqaan Abuu Mansuur Al-amriiki oo horay ugu badbaaday weerar lagu qaaday.
Fu’aad Shongole oo Muxaadaro ka jeedinayay caawa masjid ku yaal degmada Buurlo Burde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in kooxo hubeysan ay toogteen agagaarka tuulada Raama Caddey, weerarkaasi oo uu ku sheegay in uu ahaa mid gaadmo ah oo ay geysteen kooxo uu ku tilmaamay murtidiin.
Fu’aad Shonkole wuxuu sheegay in mudooyinkan ay kooxo ka tirsan Shabaab ay qorsheynayeen in ay shirqool ku dilaan Abuu Mansuur Al-Amriiki oo isaga kasoo horjeeday fikradaha Amiirka Al-Shabaab Axmad Godane.
Sidoo kale weerarkaasi markii uu dhacay kadib ayaa xubnaha ugu sareeya Shabaab sida Ibraahim Afghan, Xasan Dahir Shekh Mukhtar Roobow Abuu Mansuur iyo rag kale ay soo saareen qoraal ay ku eedeynayeen Amiirka Shabaab in weecinaayo wax ay ku sheegeen jihaadka ka socda Soomaaliya, isla markaana uu amray in la dilo mujaahidiinta ajaaniibta ee ka barbar dagaalanta Shabaab, cabashadasi oo Al-qaacida loo diray.
Cumar Hammami oo loo yaqaan Abuu Mansuur ayaa Dowladda Mareykanka waxay madaxiisa dul dhigtay Shan milyan oo doollar.